दिमागमा आउने नकारात्मक साेचबाट कसरी बच्ने ? जान्रुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
हामी खुशी, सुखी र सफल जिवनकाे लागी भाैतारिरहेका हुन्छाैँ । तर ति सबै कुराहरू हामीले आफुभित्र प्राप्त गर्न सक्छाैँ । हामी भित्र हुने साेचहरू अनुसार नै हाम्राे जिवनकाे खुसी, सुख र सफलता निर्णारण गर्छन् ।
दिमागमा आउने नकारात्मक साेचबाट कसरी बच्ने ?
हरेक व्याक्तिकाे जिवनमा एउटा सपना हुन्छ । उसले केही कुरा पाप्त गर्न चाहन्छ । त्याे कुरा प्राप्त गर्नकाे लागी आफ्नाे लक्ष्य निर्णारण गर्नुपर्छ । तर लक्ष्य निर्णारण गर्दा एकै पटक ठुलाे लक्ष्य राख्रे, याेजना बिना काम सुरू गर्ने हुँदा काम आफुले साेचे अनुसार अगाडी बढ्न सक्दैन ।
त्यसपछी व्याक्तिमा नकारात्मक साेच, निराशा आउन थाल्छ । त्यसैले नकारात्मक साेचबाट बच्नकाे लागी पहिले ठुलाे लक्ष्यलाइ साना-साना लक्ष्यमा बाँडेर काम सुरू गर्नुपर्छ । व्याक्तिकाे शारीरिक स्थितिले गर्दा पनि अल्छिपना बढ्ने, नकारात्मक साेच आउने, निराश हुने अवस्था आउँछ ।
त्यसैले सधै शारीरिक स्फुर्तिमा ध्यान दिनुपर्छ । शारीरिक व्यायम या याेगा गर्ने अथभा बिहान हिड्ने गर्नुपर्छ । बस्ता सिधा बस्ने, शिर ठाडाे बनाएर बस्ने गर्नुपर्छ । प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्छ । आफ्नाे लुक्सलाइ बेला-बेलामा परिवर्तन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आफुलाइ फरकपन महसुस हुन्छ ।
मुस्कुराउने, व्याक्तिकाे आखाँमा हेरेर कुरा गर्ने गर्नुपर्छ । कसैले केही भन्दा, काम लगाउँदा या निर्णय माग्दा धेरै मानिसहरूकाे बानी ‘हुन्छ नि त !’ भन्रे या ‘हुन्र’, ‘सक्दिन’ भन्रे हुन्छ । छिटाे हुन्छ भन्रे बानीले पछी तनाव उत्पन्र भएर आफुमा नकारात्मक साेच हावी हुनसक्छ भने छिटाे हुन्र भन्रे बानीले आफ्नाे दृष्टिकाेण नै नकारात्मक भएर नकारात्मक साेचले दिमागमा डेरा जमाउँछ ।
त्यसैले उत्तर दिँदा, ‘मैले साेचेर भन्छु’ या ‘साेचेर उत्तर दिन्छु’, ‘निर्णय लिनकाे लागी केही समय दिनुहाेस्’ भन्नु उचित हुन्छ । आफ्नाे कुनै एउटा मन्त्र बनाउन सकिन्छ । त्याे मन्त्र कुनै आध्यात्मिक मन्त्र पनि हुनसक्छ, या आफुलाइ मन परेकाे र सधै प्रेरित गर्ने कसैकाे भनाइ पनि लिन सकिन्छ ।
बिहान उठ्दा आखाँ खाेलेपछी देखिने ठाउँ या आफुले सधै देखिने कुनै त्यस्ताे ठाउँमा उक्त मन्त्र लेखेर राख्न सकिन्छ । सफल व्यवसायी जेफ बेजसले आफ्नाे ‘फ्रिज’ मा एउटा भनाइ लेखेर राखेका छन् । उनी हरेक बिहान फ्रिज खाेल्दा आफ्ना आखाँ ति शब्दमा पर्ने र ति शब्दले आफुलाइ दिनभर प्रेरित गर्ने बताउँछन् ।
यस्ताे मन्त्रले मनमा शान्ति छाउँछ, नकारात्मक साेच हट्छ र दिमाग आफ्नाे लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ । स्कुल जिवन देखी अहिलेकाे स्थितिसम्म आइपुग्दा केही न केही पुरस्कार प्राप्त गरिएकाे हुन्छ । कनै प्रशँसा पत्र या प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरिएकाे हुन्छ । आफ्नाे काेठामा ति पुरस्कार तथा प्रमाणपत्रहरू सजाएर राख्नुपर्छ ।
यसले गर्दा आफुमा म केही गर्न सक्छु भन्रे भावना जागृत हुन्छ । अझ अगाडी बढ्ने अठाेट जाग्छ । र, नकारात्मक साेचहरू हट्दै जान्छन् । समस्यालाइ समस्याकाे रूपमा मात्र हेर्ने हाे भने नकारात्मक साेँहरूले दिमागमा डेरा जमाउन थाल्छन् र हाम्राे जिवन नै नकारात्मकताले भरिन्छ ।
आफु भावनात्मक रूपमा कमजाेर महसुस भएकाे छ, कसैले चाेट पुर्याएकाे छ भने ति भावना डायरीमा लेख्रे बानी बसाल्नुहाेस् । धेरै जस्ताे कला साहित्यकारहरूले आफ्नाे सिर्जनामा आफ्नाे जिवनका पाटाेहरू उतारेका हुन्छन् । अर्काे कुरा, हाम्राे जिवन नै समस्या, जाेखिम र चुनाैतिकाे सिलसिला हाे ।
त्यसभित्र सकारात्मक कुरा, सम्भावनाहरू र अवसरहरू लुकिरहेका हुन्छन् । आफुले ति कुरा पहिल्याउनुपर्छ । त्यसैले भनिन्छ नि, ‘तिम्राे जिवन त्यस्ताे बन्छ, जस्ताे तिमीले आफ्नाे जिवनका घटनाहरूमाथी प्रतिक्रिया जनाउछाैँ’ । सकारात्मक दृष्टिकाेण भनेकाे हरेक कुरालाइ सहि भन्रु हाेइन ।
व्याक्तिमा आलाेचनात्मक साेच पनि हुनुपर्छ । तर आलाेचनाकाे लागी सही तर्क हुनुपर्छ । सही तर्क भएकाे आलाेचनालाइ सकारात्मक आलाेचना भनिन्छ भने त्याे कुराकाे नकारात्मक पाटाे मात्र हेरेर आलाेचना गरिनुलाइ नकारात्मक आलाेचना भनिन्छ । त्यसैले बाेल्दा विचार पुर्याएर बाेल्नुपर्छ, विषयवस्तुमाथी टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिले त्याे विषयवस्तुकाे अध्ययन गर्नुपर्छ ।
किन आउँछ नकारात्मक साेच,कसरी हटाउने ?
मन खिन्न हुने, उदास हुने, नरमाइलो लाग्ने, रमाइलो कुरामा खासै रुचि नहुने, आफूले जीवनमा केही गर्न सक्दिनँ भन्ने सोच्ने, जीवन व्यर्थ लाग्ने व्यक्तिलाई डिप्रेसन निम्तिने गर्छ। अरुले के भन्लान्, मेरो कुरा काट्दै छन् कि भनेर शंका गर्ने, मलाई मार्ने षड्यन्त्र रचेका छन् कि भन्ने शंका गर्ने नकारात्मक सोचाइ हुन्।
यस्ता सोचाइले मान्छेलाई हिंस्रक बनाउँछ। धेरै घमण्ड गर्ने, मभन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने नकारात्मक सोचका कारणले गर्दा नै हुने हो। यस्तो समस्या बढ्दै गएपछि बाइपोलार डिसअर्डर भन्ने मानसिक समस्या देखापर्छ। यस्तो समस्या भएको व्यक्तिले समाजमा नपच्ने, नमिल्दो व्यवहार देखाउने गर्छन्।
बारम्बार नकारात्मक सोचाइ आउँछ भने योग, ध्यान गर्ने, शान्त वातावरणमा आँखा बन्द गरेर बस्ने गर्नाले विस्तारै नकारात्मक सोचाइ हट्दै जान्छ। आफूलाई जुन कुराले चिन्तित बनाएको छ र त्यो कुरा साथीभाइसँग भन्नाले मन हलुका हुन्छ र विस्तारै नकारात्मक सोच हट्दै जान्छ।
Don't Miss it जाडाेमा रूघाखाेकी अर्थात् चिसाेका राेगहरूबाट यसरी जोगिनुहाेस्